अमिताभ बच्चनपछि अब अनुपम खेरको परिवारका ४ सदस्य कोरोना संक्रमित – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/अमिताभ बच्चनपछि अब अनुपम खेरको परिवारका ४ सदस्य कोरोना संक्रमित
मुम्बइ। बलिउड महानायक अमिताभ बच्चन र उनका छोरा अभिषेक कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको भोलिपल्टै अर्का दिग्गज बलिउड अभिनेताको परिवारका सदस्यहरु पनि कोरोना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ । अभिनेता अनुपम खेरको परिवारका ४ सदस्य संक्रमित पाइएका छन् । अनुपमकी आमा, भाइसहित परिवारका सदस्य संक्रमित भएका हुन् ।
अनुपमले आइतबार बिहान ट्वीट गर्दै यसको जानकारी दिएका हुन् । अनुपमका अनुसार केही दिन अघिदेखि उनकी आमा दुलारीको स्वास्थ्य बिग्रिएको थियो । परीक्षणका क्रममा उनीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । त्यसपछि अनुपम र उनका भाइ राजुको परीक्षण गरियो । अनुपम नेगेटिभ पाइए तर राजु पोजेटिभ थिए । राजुकी पत्नी र राजुकी छोरी पनि कोरोना संक्रमित पाइएका छन् । भतिजाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ । अनुपमकी आमालाई कोकिलाबेन अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।
विवाह गरेको तीन महिना नबित्दै, श्रीमानको पूर्व प्रेमिकाले आँखा अगाडी गरिदिइन् श्रीमानको ह’त्या (भिडियो हेर्नुस्).
पोखराका राज सेन ठकुरीको कोरोना संक्रमण निधन, कीर्तिपुरवासी विकास महर्जन पनि कोरोनासंग हारे !
साउदी अरब र यूएईमा पनि देखियो को’रोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओ’मिक्रोन’